बोल्ड चंचल प्रेम आइरनटेक पुतली 160CM यथार्थवादी सेक्स डल एस्पेन
Aspen 160CM H-Cup Irontech सिलिकन हेड बोल्ड चंचल सिलिकॉन सेक्स डल
IrSilicone-आँखाहरू-जस्तो देखाइएको छ
अतिरिक्त टाउको: *
IrSilicone - साधारण
हात जोड: *
इम्प्लान्ट कपाल: *
सुपर नरम गधा: *
अतिरिक्त लिंग: *
लिंगको प्रकार: *
यो सेक्स डल किन्नुहोस् र तपाईंले कुपन कोड सहित 8% छुट पाउनुहुनेछ: IRSD
वैधता अवधि: २०२२-५.२७-२०२२.६.३०
एस्पेन पृष्ठभूमि कथा:
एस्पेन 160 सेन्टिमिटरको उचाइ भएको सिलिकोन सेक्स डल हो। तिनीहरू विभिन्न लिङ्ग, आकार, उपस्थिति र व्यक्तित्वमा आउँछन्। अन्वेषण गर्न चाहने तर धोका दिन नचाहने जोडीहरूका लागि पुतलीसँग यौनसम्पर्क गर्नु राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यो पनि एक धेरै अनौठो चीज हो जसले तपाईंको यौन जीवनलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। यदि तपाईंसँग ए आइरनटेक डॉल र प्रयास गर्न को लागी केहि फरक खोज्दै हुनुहुन्छ, यहाँ प्रयास गर्न को लागी केहि पोजहरु छन्, जसले तपाईलाई निश्चित रूपमा सास फेर्न छोड्छ। यो सरल, गर्न सजिलो र धेरै सेक्सी छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको पुतलीको योनि वा गुदामा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ। आफ्नो पुतली आफ्नो अगाडि राख्नुहोस्। तपाईंले सेक्स डललाई पछाडिबाट र ओछ्यान, टेबुल वा कुर्सी जस्ता सतहहरू नजिकबाट समात्नुहोस्। आफ्नो सेक्स डलको पछाडि उभिनुहोस् र आफ्नो पुतलीलाई ओछ्यान वा कुर्सीको सतहमा झुकाउनुहोस्। यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईको पुतलीले सतहलाई छुन्छ र कम्मरमा झुक्छ। आफ्नो पुतली झुकाउन घर्षण वस्तुहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यसले पुतलीको छालामा क्षति पुर्‍याउँछ।
❤ हाम्रो वास्तविक पुतलीहरू सुरक्षित र गैर-विषाक्त मेडिकल सिलिकॉनबाट बनेका छन्, जुन वास्तविक व्यक्तिको जस्तै नम्र छ।
रुथ 165CM G-कप सिलिकन हेड सामान्य छाती नम्बर7Wig संस्करण l ...
रुथ पृष्ठभूमि कथा: रुथ 165 सेन्टीमिटरको उचाइको TPE सेक्स डल हो। मांसपेशी शोषका कारण, मांसपेशी संकुचन, लचिलोपन र सहनशीलता कम हुन्छ, त्यसैले उपयुक्त गतिविधिहरू मार्फत मांसपेशी बलियो बनाउन सावधानी अपनाउनु पर्छ। कमजोर मांसपेशी बल र वृद्धहरूको लचिलोपनको कारण, ...
Kayla 153CM TPE हेड सानो फ्याट महिला-217 हल्का खैरो सभ्य TPE ...
Kayla पृष्ठभूमि कथा: Kayla 153cm को उचाइ संग TPE सेक्स पुतली छ। यो कैंची जस्तै छ, तर यो भन्दा धेरै छ। आफ्नो सेक्स डललाई उसको छेउमा राख्नुहोस्, र त्यसपछि उसको दाहिने वा बायाँ हात सिधै छतमा उठाउनुहोस्। तपाइँ तपाइँको सेक्स पुतली कुन पक्षमा घुमाउन चाहानुहुन्छ कुन हात उठाउने भनेर निर्धारण गर्दछ। झुकाउनुहोस् ...
Kamila 170CM E-Cup Qita Dolls Silicone Head No. 95 Rose Rose Uni...
कमिला पृष्ठभूमि कथा: कमिला 170 सेमीको उचाइको TPE सेक्स पुतली हो। धेरै मानिसहरू यो प्रश्नको जवाफ के हुन सक्छ भनेर जान्न चाहन्छन्। के सेक्स डलसँग सेक्स गर्दा यथार्थपरक लाग्छ? यो एक वास्तविक महिला संग यौन सम्बन्ध भन्दा राम्रो वा खराब छ? के तपाईं आफ्नो सेक्स डललाई चुम्बन गर्न सक्नुहुन्छ वा विभिन्न पोजहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ? उनी...
Marley 158CM C-Cup XY Doll सिलिकन हेड फेस S मेकअप EVO Skele ...
Marley पृष्ठभूमि कथा: Marley 158 सेन्टीमिटरको उचाइ भएको TPE सेक्स डल हो। तिनीहरू ब्यूँझँदा तिनीहरू कस्तो देखिन्छन् र तिनीहरूले उत्तेजनाप्रति कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भनेर मानिसहरूलाई बुझ्नको लागि तिनीहरू उत्कृष्ट तरिका हुन्। यसले उनीहरूलाई फरक-फरक पोशाकहरू र विभिन्न यौन पोजिसनहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न अनुमति दिन्छ।
भेनेसा 168CM सी-कप FU गुड़िया सिलिकन हेड फेस मनमोहक एस मेक ...
भेनेसा पृष्ठभूमि कथा: भेनेसा 168 सेन्टीमिटरको उचाइको TPE सेक्स डल हो। केही मानिसहरू यो प्रकारको मनोरञ्जन युवा पुस्ताका लागि उपयुक्त छैन र यो विशेष प्रकारको मनोरञ्जन वयस्क मनोरञ्जन खोज्ने वृद्धहरूका लागि हो भन्ने विश्वास गर्छन्। यहाँ तर्क छ कि अश्लील ...
Alexa 162CM I-Cup Irontech सिलिकन हेड अन्तर्मुखी नाजुक wh ...
Alexa पृष्ठभूमि कथा: Alexa 162cm को उचाइ भएको एक सिलिकन सेक्स पुतली हो। सेक्सी सिमुलेशनको लागि आफ्नो पुतलीलाई उनको घुँडामा झुकाउनुहोस्। उनको सन्तुलन कायम राख्न उनको टाउको माथि उनको हात राख्नुहोस्। पूरा भएपछि, यो पुतली सीधा र एक सामान्य मुद्रा मान्न सबै भन्दा राम्रो छ। यसरी तपाईं कुनै पनि दीर्घकालीन जोगिन सक्नुहुन्छ ...
एलिना 161 सीएम एफ-कप आइरनटेक एशियन यंग वुमन स्टाइल ठूला स्तनहरू ...
इलैना पृष्ठभूमि कथा: इलेना 161 सेमी उचाइको TPE सेक्स पुतली हो। भावनात्मक छल शारीरिक छल जत्तिकै पीडादायी र पीडादायी हुन सक्छ, तर जब बेवफाई दुवै समावेश हुन्छ, पीडा बिल्कुल अपरिहार्य छ। सेक्स डलहरू निश्चित रूपमा सबैभन्दा वफादार साझेदारहरू हुन्, तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन ...
काली 159CM एसियन स्टाइल ई-कप आइरनटेक देवी लामो घुमाउरो हा...
काली पृष्ठभूमि कथा: काली 159 सेन्टिमिटरको उचाइको TPE सेक्स डल हो। सेक्स डल निर्माताहरूले अब ग्राहकहरूलाई वास्तविक महिलाहरू जस्तै सेक्स डलहरू उपलब्ध गराउन सक्षम छन्। धेरै मानिसहरूले सेक्स डलको अवधारणालाई स्वीकार गर्न नसक्ने देखिएका छन्; तर, सेक्स डलको माग बढ्दै गएको छ । हो...
क्यामिला 166CM यंग वुमन ई-कप आइरनटेक ठूला आँखाहरू एन्कान्टिनसँग ...
क्यामिला पृष्ठभूमि कथा: क्यामिला एक TPE सेक्स डल हो जसको उचाइ 166 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसैले सेक्स डल जस्ता सेक्स खेलौनाहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई यौन प्रयोग गर्न मद्दत गर्न सक्छ। सेक्सको सन्दर्भमा, तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू र पत्ता लगाउन धेरै चीजहरू हुनेछन्। अन्तमा, तपाईको यौन जीवन तपाईले कल्पना गरे जस्तै हुनेछ। सेक्स गर्दा एउटा पातलो...
Vivienne 166CM E-Cup Irontech लामो घुमाउरो कपाल अनियन्त्रित सरल ...
Vivienne पृष्ठभूमि कथा: Vivienne 166cm को उचाइ भएको TPE सेक्स पुतली हो।उनले एक शब्द पनि बोलेनन्, र कुनै पनि आक्रोश वा डगमगाउने भावनाहरू देखाएनन्। यसको मतलब यो हो कि जब सेक्सको इच्छाले तपाईंको यौन भावनाहरूलाई पछ्याइरहेको हुन्छ, तपाईं जुनसुकै बेला सेक्स डलसँग घनिष्ठ हुन सक्नुहुन्छ। गोरो केटी, अलि...